Vaovao - Mihamitombo haingana ny tsenan'ny Fonosana Pulp, ary lasa toerana mafana ny famenoana sakafo.
Araka ny fanadihadiana vaovao, satria ny orinasa indostrialy dia mbola mila fitaovana hafa amin'ny fonosana maharitra, Etazoniafonosana vita amin'ny pulptsena dia antenaina hitombo amin'ny tahan'ny 6.1% isan-taona ary hahatratra 1.3 lavitrisa dolara amerikana amin'ny taona 2024. Ny tsenan'ny fonosana sakafo dia hahita ny fitomboana lehibe indrindra.
Araka ny fanadihadiana ity, ny tombontsoa ara-tontolo iainana nyfamolahana pulpanisan'izany ny recyclable,biodegradabilityary ny fahafahana manao zezika amin'ny trano indostrialy.
Fanampin'izany, ny fonosana vita amin'ny pulp dia mandray soa avy amin'ny: tombony amin'ny fampisehoana, ao anatin'izany ny fikojakojana tsara, ny fanohanana ary ny fanakanana;
Mamolavola vokatra vita amin'ny fibre izay mifaninana kokoa amin'ny solon'ny plastika amin'ny vidiny, ny fampisehoana ary ny hatsarana;Fanoherana mafy ny vokatra plastika fanariana vita amin'ny foam polystyrene foam (EPS) sy ny fandrarana ny tanàna sasany amin'ny vokatra sakafo EPS sasany.
Amin'ny fotoana maharitra, ny tsenan'ny serivisy fikarakarana sakafo dia antenaina hitombo haingana indrindra amin'ny varotra isan-taona, satria ny trano fisakafoanana sy ny toeram-pisakafoanana hafa dia mihamitombo hatrany.miaro ny tontolo iainanaakorandriaka vita amin'ny pulp, lovia ary vilia baolina, ary koa ny lovia antoandro ho an'ny fanaterana, fanaterana ary fanaterana sakafo.
Lavitra Atsinanana Geotegrity Fiarovana ny tontolo iainanaFonosana sakafo (fitaovana latabatra)Ny vokatra dia mampiasa mololo amin'ny fambolena, vary sy mololo varimbazaha, fary ary bararata ho akora fototra hahatanteraka ny famokarana tsy misy loto sy mitsitsy angovo ary manodina angovo madio.Nandalo ny fanamarinana iraisam-pirenena 9000;14000 fanamarinana fiarovana ny tontolo iainana, nandalo ny fisafoana iraisam-pirenena sy ny fitsapana ny FDA, UL, CE, SGS sy ny Japoney Minisiteran'ny fahasalamana sy ny fiahiana any Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana, nahatratra ny fenitra iraisam-pirenena fahadiovana ny sakafo fonosana, ary nahazo ny anaram-boninahitra ny "Ny vokatra tompon-daka voalohany an'i Fujian amin'ny indostrian'ny famokarana"
Fotoana fandefasana: Mar-31-2022